Alaab -qeybiyeyaasha Boorsada & Warshadda - Soo -saareyaasha Boorsada Shaandhada Shiinaha
Precision Filtration waxay soo saartaa khad dhammaystiran oo ah bacaha shaandhaynta Karti Sare. Bacaha shaandhayntu waxay wax ku ool u yihiin codsiyada halkaas oo loo baahdo hufnaanta sifeynta. Dhammaan bacaha shaandhaynta Karti Sare waxaa lagu heli karaa cabbirro kala duwan si ay ugu habboon yihiin guryaha bacda shaandhaynta warshadaha ee caadiga ah. Cabbirka Custom Bacaha shaandhaynta Karti Sare ayaa la soo saari karaa.
Bacda Shaandhaynta AGF
LCR-100 Bacda Shaandhaynta
Precision Filtration waxay soo saartaa khad dhammaystiran oo Bacaha Shaandhaynta Saliidda si ay meesha uga saaraan wasakhda saliidda ee durdurrada dareeraha ah. Bacaha ayaa waxtar u leh biyaha, khadadka, rinjiga (oo ay ku jiraan hababka E-Coat), iyo dheecaannada kale ee habka. Dhammaan bacaha shaandhaynta soo -saarka saliidda waxaa lagu heli karaa cabbirro kala duwan si ay ugu habboon yihiin guryaha bacda shaandhaynta warshadaha ee caadiga ah. Bacaha Shaandhaynta Soo -saarka Saliidda ee Cabbirka Custom -ka ayaa la soo saari karaa.
LCR-500 Boorsada Shaandhada
Boorsada shaandhaynta nylon
Precision Filtration waxay soo saartaa xarig dhammaystiran oo bacaha shaandhada ah oo loogu talagalay warshadaha sifeynta dareeraha. Bacaha cabbirka caadiga ah ayaa la heli karaa si ay ugu haboonaadaan inta badan guryaha shaandhaynta ee suuqa. Bacaha shaandhaynta gaarka ah ayaa sidoo kale lagu soo saari karaa sifaha macaamiisha.
Bacda Shaandhaynta PGF